Home Wararka Cusman Dubbe oo si Xun ugu Gafay Hooyinka iyo Aabayasha ay...
Cusman Dubbe oo si Xun ugu Gafay Hooyinka iyo Aabayasha ay caruurta ka maqan yihiin.
Oohinta hooyooyinka ilmadooda qubaneysa iyo Laab ka ooyga aabbayaasha caruurtooda loo iibgeeyey Itoobiya sidii calooshood u shaqeystayaal oo uu ay dowladda FS ku sheegtay inay been tahay oo lagu qarinayo weerar cirka ay Kenya ku qaaday xadka u dhaxeeya labada dal. Hooyooyinka ooyayaa ma waxaa la siiyey lacag si ay jidadka isaga ooysiiyaan waa sida uu hadalkiisa ku maldahay Cusman Abukar Dubbe Wasirkii hore ee Warfaafinta, haddana ah madaxa CBB.
Ayaan darrada dalkeenna haysataa waxaa ka mid ah hogaankii dalka sida sharafta leh loogu dhiibay oo raba inuu dalka ku hogaamiyo afka CBB, iyadoo xaaladda ay joogto geeri iyo nolol. Waxaa baraha bulshada lagu soo daayey koox ka mid ah dadka beenta, xanta, aflagaada fannaniinta iyo siyaasiyinta lacag ka sameeya oo haddana ku darsaday inay been ka sheegaan dhibaatada u talagal ah ee loo geystay miiddii dalka oo Itoobiya laga iibsaday.
Inkirmaadda iyo diidmada halka ay caruurtaas ku dambeeyeen ee Dowladda FS waxay soo jiitameysay muddo dheer oo waxay ahayd wax lagu yaqaannay Dubbe ha dhawaaqo diiq yeerka ama Odawaa debmi qaran ha ku galo intuu Fahad iyo Farmajo difaac isleeyahay.
Hasa yeeshee hadda waxaa CBB-da Madaxtooyada u shaqeysaa loo qeybiyey lacago waxaana la siiyey waajibaad ah inay beeneeyaan in Caruurtaas ay wax dhibaato ah qabaan oo dalka ku soo noqon doonaan iyagoo tababaran.
Sidoo kale waxaa waajibaadkooda ka mid ah in la weeraro xildhibaankii, hooyadii, shacbkii iyo ciddii isku daydaa inay ka xanuunsato oo ay dareen ka muujiso wiilshada xaabada laga dhigtay ee lagu shubay dalka Itoobiya. Waxaan la amray CBB inay raadiyaan haddii ay jiraan wax eed ah oo la soo qaadi karo waxaana hadda la bilaabay in:
Eedeyn loo soo jeediyo Heshiis(Contract) shaqaale oo ay Dowladda Somaliya la gashay dalka Sucuudiga si aan gabdhaha iyo wiilasha u shaqo tagaa loo dhibaateyn. Heshiiskaas waxaa ka wada shaqeeyey Wasiirkii dhallinyada Cabdweli Muddey ee dowladdii hore , haddana ah gudoomiye K/X/ Goalaha shacbiga iyo Safiirkii hore ee Somaliya Danjire Dahir Maxamuud Geelle. Lama hayo ilaa maanta hooyo ooyeysa oo leh waxaa la dhibaateeyey gabadheda, waxaa iga maqan cunug balse waxaa la hayaa hooyin iyo reero ku dhaqan lacagaha ay ka soo shaqeeyaan gabdhahooda adeegtada ah iyo wiilashooda darawallada ka ah dalka Sacuudiga, iyadoo ay xuquuqdooda ilaaliso dowladda Sucuudiga heshiiska dartiis sida ay u ilaaliso heshiiyada la mid ah kan oo ay kula jirto waddamada Indoneysiya, Filibiins, Bakistan iyo Bangaladhesh. Haddii wiilashii iyo dumarkii loo qaaday Sacuudiga war xun leh uu ka Soo yeeri lahaa afarta sano ee dawladda NN dalka hoggaamineysay waxaa hubaal ahayd inay iyaga eedeynta bilaabi lahasyeen mar hore, iyagoo ku sumcad Dilka madaxdii ka horreysay tasoo ay khabiir ku tahay dowladdaan, balse duca mooyee dareen lama soo sheegin.
Qofkii wax ka weydiiya dowladda gaar ahaan Fahad, Kheyre iyo Farmajo in la weeraro oo loo raadiyo qiil kasta oo lagu dhaawici karo Sharaf iyo naf ahaanba.
In la handado idaacaha gudaha iyo hogaamiyayaasha bulshada ee muujiya inay la wadaagayaan xanuunka walaalahooda Somaliyeed.
In Madaxda CBB Cusman Dubbe oo Dowladdii Dhacday Warfaafinta ugu qornaa uu sheegay in hooyooyinka ooyaya iyo aabaayaasha laabta ka jiran ee ka welwelsan ilmo ay si dhib leh ku soo koriyeen oo ka mqan ay baroortooda been tahay oo lagu qarinayo duqeyn ay Gedo iyo Jubada Hoose ka geysatay Kenya, sow maaha akhlaaqxumo shakhsiyadeed, gef xanuun badan oo aabanimo iyo mas’uuliyad darro shakhsiyadeed iyo mid dowladeed oo uu u geystay madaxa CBB mudane Cusman Dubbe dadkaas dhibaateysan oo uu xanuunka ku sii kordhiyey.
Isku soo duub Somaliya maanta waxay u baahan tahay :
In la soo celiyo kalsoonidii dadka ay dowladda ku qabeen.
In la dhayo boogaha xanuunka badan ee shacbiga Somaliyeed gebii ahaantoodba loo geystay.
In sharciga iyo Kala dambeynta lagu soo dabbaalo hay’adaha awooddii dalka u isticmaalay si shakhsi ah.
Iyo in Ammaanka lagu soo celiyo halkii uu joogay 2016 oo magaalooyinka waaweyn dhulka looga safri jiray markii doorashada la aadayey.